Igbo, Romans, Lesson 029 -- The Courageous Faith of Abraham is our Example (Romans 4:19-25) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 029 (The Faith of Abraham is our Example)
d) Onye nwe okwukwe nwere obi ike Abraham (Ndi Rom 4:19-25)
NDI ROM 4:19-22
19 N’agweghi ike n’okwukwe, o chetaghi aru nke ya onwe-ya nwuru anwu (ebe obu na o gbara ihe ra ka nkpuru-obi), na aru akpa nwa Sera. 20 O kwughi nkwa nke Chineke site na ekweghi-ekwe, kama esiri ya ike na okwukwe, na-enye Chineke otuto, 21 ebe o kwenyesiri ike na ihe o kwere na ya nwekwara ike ime. 22 Ya mere "aguru ya nye ya dika ezi omume."
Abraham nuru okwu amuma nke Chineke na ahoputara ya ka ọ buru nna nke ọtutu ndi mmadu. Okwu mkpughe a ghaghi iju Abraham anya, ebe obu n’enweghi nwa, kama o sitere n'okwukwe nara ya. O kwenyere na Chineke na-enye olile anya mgbe olileanya nile nke ụmụ mmadụ lara n’iyi. Abraham emehieworu na okwukwe nke okwukwe ya, mgbe amuru ya Ishmael site na ohu Egypt. Ugbu a, dịka ọ dịka ihe na-agaghị ekwe omume na nwunye ya mere agadi ịmụ nwa, ọ naghị elele iwu nke okike anya, kama na Onye Okike nke okike, onye nwere ike ịgbanwe iwu okike. Abraham ejighi aghụghọ duhie onwe ya maka na o chere na ọ gaghị ekwe omume inwe nwa nwoke site na Sara, nwunye ya. Kama ọ gbara okwukwe ya ume, jidesie okwu Chineke ike, dabere na eziokwu ebighi-ebi ya, marakwa n'ezie na Onye nwe ebube anaghị agha ụgha, na ọ gaghị emezu nkwa ya, ọbụlagodi ma uche mmadụ hụrụ. ọnweghị ụzọ iji mezuo nkwa ahụ.
A guzosiri ike na ikwesi ntụkwasị obi nke Chineke na ọgụ okwukwe a ka agụrụ Abraham dịka ezi omume (Jenesis 15: 1-6; 17: 1-8).
Kraist kpọrọ gị taa, ka ị soro keta okwukwe nke Abraham. Dika anyi n’ile onwe anyi anya ma banye n’ime ulo uka anyi di omimi, anyi na achoputa na ndi mmadu noo n’enweghi ike nke ime mmụọ, na enweghi ike ma nwuru anwu. Ka osi di, Kraist choro inye otutu nde mmadu ndu ebighi ebi site na okwukwe gi ma nkem. Ọ chọrọ ịgọzi ihe akaebe anyị na ịhụnanya ya nwere ike ịnwe ma bakwanye ụba dịka kpakpando nke elu-igwe. Ikwenye na nkwa na oku nke Jisos i g’enye umu aka nke okwu site n’okwukwe gi? Ikwenyere na Chukwu nwere ike imeri enweghi ike gị, tụghachị ụlọ ụka gị dị oke ọkụ, ma nweekwa ike ibulite onwe ya ụmụ nke mmụọ ya site n'obi ha siri ike, dị ka Jọn Baptist kwuru: Chineke nwere ike iwulite ụmụ Abraham site na nkume nke dina n'ọzara. ọ bụrụ na i chegharịghị n'eziokwu? You na-akwanyere Chukwu ugwu? Gi tukwasiri obi na Onye nwe ebube, tu kwa ntụkwasị obi na Ya, karie inwe echiche ojoo banyere ulo uka luke gi na omume oma gi? O nwere ike iji gị were bulie ọtụtụ ndụ nke ike nke ndụ ya. Mara na Chineke nke Abraham, Onye nwe Pọl bụ otu onye ahụ ụnyaahụ, taa na ruo mgbe niile ebighị ebi. Ọ na-atụ anya okwukwe gị, n’ihi na nke a bụ mmeri emeri ụwa - okwukwe anyị. Anwula! Eledala anya, ọbụlagodi na mgba nke okwukwe gị ebigidela kemgbe ọtụtụ afọ na iri afọ, dịka o mere na ndụ Abraham, rue mgbe ikpeazụ otu obere mkpụrụ amịpụtara n’ime ya, nke bụ Aịzik dị nwayọ. Na agbanyeghi mgba nile nke Abraham, Onye-nwe mere ka obi sie ya ike na mmụọ, ma mee ya nna nke ndị amụma. Onyenweanyi gi di ndu, o choro igosi gi na okwukwe gi n’ezi gi. Yabụ, bulie obi gị elu, mee ka aka gị sie ike, nke na-akwụda ikpere, na ikpere gị ike na-adịghị ike, n'ihi na Jehova dị ndụ, ọ na-ebukwa ụzọ gị n’agha ime mmụọ gị.
NDI ROM 4:23-25
23 Ma, ọ bụghị n'ihi ya ka e dere ya, n'ihi na etinyere ya n'aka, 24 kamakwa maka anyị. Agaghị-akpọrọ ya ndị kwere na Ya Onye mere ka Jizọs Onye-nwe-ayi si n'ọnwụ bilite, 25 Onye arara Ya nye site na mmebi iwu nile ayi, Onye mere ka O si n’onye ezi omume guzosie ike.
Ihe omuma nke okwukwe ayi toghere na nkwenye zuru oke, na-egosi nkpughe nke Abraham. Taa, Chineke abụghị igosipụta onwe ya dị ka onye pụrụ ime ihe niile, onye ukwu na onye zoro ezo, kama zitere anyị Ọkpara ya Jizọs ka anyị wee mara n'ịhụnanya ya bụ Chineke nke nna. Ihe yiri ka ọ gaghị ekwe omume mere, Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya nwụrụ ka ihichapụ mmehie anyị. Chineke dị nsọ ebibighị ndị mmehie n'ihi mmebi iwu ha, kama o bibiri onwe ya, ka e wee zọpụta anyị ndị ọjọọ. Kinddị obi ebere, ịhụnanya, ịchụ onwe onye n’àjà, inye, na ndidi Chineke bụ Chineke anyị.
Mgbe Kraist siri na ndi nwuru anwu bilie, mmeri nke aja ya putara. Nna ya ahapụghị ya, mgbe ọ wụsịrị iwe ya nile n’elu nwa atụrụ a kpọgidere n’elu obe, kama o welitere Ọkpara ya aka ya dị ọcha, ma gosipụta n’ụzọ doro anya na àjà ya pụrụ iche kwekọrọ n’uche Chineke. Ya mere, nbilite n’onwu nke Kraist na-akwado n’ebubo ndi ezi omume anyi. Obu ihe anaghagh na Kraist rigoro nelu igwe tutu olili ya, ma buru ezigbo enyi nke Chineke. Mba! Chineke mere ka O si n’onwu rida ka anyi wee hu ma mara na emezigharị mmekorita nke diri Chineke na uwa n’obe.
Taa, anyị na onye ịrịọ arịrịọ na-anọdụ n'aka nri Chineke. Ọ na-eme ihe n’etiti Onye Nsọ na anyị, ma na-arụpụta nsonaazụ nke ịchụ-aja ya, ka anyị wee ghara izu ike, kama na-aga n’ihu n’okwukwe anyị, ma kwere na Kraịst nwere ike ịzọpụta ndị niile na-abịakwute Chineke site n’aka ya. , ebe ndu ebighi-ebi ịrịọchitere ha arịrịọ.
Yabụ, kedu ebe okwukwe gị dị na nsogbu, egwu na ihe egwu niile? Ebee ka nchekwube gị banyere ọbịbịa nke alaeze Chineke taa, na ọmụmụ nke abụọ na nde mmadụ? Kraist emekorita anyi na Chukwu, ma na ugbua ka odi ndu igosi ezi anyi site na ikpe ya. Kwere na iyi nke mmiri na-enye ndụ na-asọ site n’okwukwe gị ruo n’ime obi ndị nwụrụ anwụ. Kwere na enwela obi abụọ, n'ihi na Kraịst dị ndụ n'ezie.
EKPERE: O Onye nwe Chukwu, I di ndu, I ziga anyi ka anyi zisa anyi ozi n’uwa niile. Orù-gi Abraham we kwere na ya onwe-ya na Sera, mb theire agadi-ha, muru ime ha dika umu nke ebere-gi, nke ag whomji gọzie ndi ahu nile. Imeri obere okwukwe anyị, ma mee ka ntụkwasị obi anyị sie ike na anyị nwere ike ịtụkwasị gị obi na ọnwụnwa anyị ka ike zuo ike gị n’adịghị ike anyị. Daalụ n’ihi na ị mere ka anyị mata na nde mmadụ ga-amụ ọzọ n’ụbọchị ndị a, ebe ị na-adị ndụ ma na-achị ruo mgbe ebighị ebi.
Gịnị ka anyị na-amụta n’okwukwe okwukwe nke Ebreham?
Ya mere, ebe aguworo ya na okwukwe,
Anyị na Chineke dị n'udo
site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi.
(Ndi Rom 5:1)
Page last modified on January 26, 2021, at 03:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)